२०७५ पछि आएका नयाँ पुस्तकहरू - साहित्य - साप्ताहिक
बुक हिलले ०७५ वैशाखयता विभिन्न विधाका ४ वटा पुस्तक बजारमा ल्यायो । भूपेन्द्र खड्काका अनुसार बुक हिलले यो वर्षभरि २५ वटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै फाइन प्रिन्टले वैशाख यता जम्मा एउटा पुस्तक बजारमा ल्याएको छ । बितेका महिनामा विभिन्न प्रकाशन गृहले सार्वजनिक गरेका पुस्तकसम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी :
जिन्दगी, रिल्याक्स प्लिज !
शरीर, मन र आत्मा मिलेर बन्छ— जिन्दगी । यी तत्वका आ–आफ्नै लक्ष्य छन् । शरीरको लक्ष्य हो, सुख । मनको शान्ति अनि आत्माको आनन्द । शरीरको सुख, मनको शान्ति र आत्माको आनन्द— यी तीन पुँजी जीवनरूपी त्रिवेणीमा समाहित हुन पाए व्यक्तिले सत्यं शिवं सुन्दरमको ‘माल’ पाउँछ । सत्–चित्–आनन्दको ‘माला’ लगाउँछ, अर्थात् उसको जिन्दगी साँच्चिकै ‘मालामाल’ हुन्छ । यही मालामाल जिन्दगी नै रिल्याक्स जिन्दगी हो— भित्र आनन्दले भरिपूर्ण र बाहिरबाट सुन्दर जिन्दगी । फाइन प्रिन्टको यो पुस्तक योग विज्ञान तथा जीवनशैली प्रशिक्षण एवं वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा सुपरिचित डा. राजु अधिकारीले लेखेका हुन् ।
पिनाकल पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको पुस्तक हो— ‘महागुरु’ । एबीसी टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश राणाद्वारा लिखित धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयवस्तु समेटिएको यो पुस्तक नौवटा उपशीर्षकमा विभाजित छ । पुस्तकमा मानिसको भौतिक अवस्थालाई कसरी आध्यात्मिक बनाउने भन्ने विषयमा भगवान् कालभैरवसँग गरिएको अन्तरसंवादलाई उतारिएको छ । पुस्तकमा जीवनको रुपान्तरण, आध्यात्मिक साधना आदिमा जोड दिइएको छ । यो पुस्तकको मूल्य ५ सय रुपैयाँ छ ।
पत्रकारितामा लामो समयदेखि क्रियाशील मोहन मैनालीको ‘देखेको देश’ ३ दर्जनभन्दा बढी निबन्धको संग्रह हो । मैनालीले आफ्नो यो कृतिमा नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक मान्यता, राजनीतिक व्यवस्था तथा आर्थिक जटिलतालाई मिहिन ढंगले केलाएका छन् । यो पुस्तकमा यी कुराले नेपालीहरूको जनजीवनमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा देखाइएको छ । ४ सय रुपैयाँ (सफट् कभर) तथा ५ सय रुपैयाँ (हार्ड कभर) पर्ने यो पुस्तक बुकहिलले प्रकाशन गरेको हो ।
फिक्सन डिजाइनर कुमार नगरकोटीको ‘ज्ञ’ स्वैरकाल्पनिक उपन्यास हो । यो नगरकोटीको आठौं कृति तथा दोस्रो उपन्यास हो । नगरकोटीका अनुसार १ सय ८४ पृष्ठको ‘ज्ञ’ ‘नोभिला’ हो । यो उपन्यासमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग प्रचुर रूपमा गरिएको पाइन्छ । केही थ्रिलर प्रकृतिको यो उपन्यासको मूल्य ४ सय रुपैयाँ छ ।
एसएलसी परीक्षा दिएर हजुरबा भेट्न आएका लमजुङका कृष्णप्रसाद अधिकारीको माओवादीबाट रत्ननगरमा २०६१ मा हत्या भयो । आफ्ना छोराको हत्यारालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै अनशन बसेका थिए– नन्दप्रसाद अधिकारी । अनशन बसेको ३ सय ३२ औं दिनमा वीर अस्पतालमा उनको ज्यान गयो । त्यसपछि उनकी पत्नि गंगामाया अनशन बसिन् । उनै गंगामाया अधिकारीको आत्मकथा हो— न्यायको अवशान । गंगामायाले गरेको संघर्ष र उनका भोगाइहरू यो कृतिमा समेटिएका छन् । बुक हिलले बजारमा ल्याएको यो पुस्तकको सम्पादन घनश्याम खड्काले गरेका हुन् । न्यायको अवशानको मूल्य ४ सय रुपैयाँ छ ।
शल्यक्रिया पुस्तक समीक्षाको सँगालो हो । यो मदनमणि दिक्षितको माधवी एवं ऋग्वैदिक नारी चरित्रको त्रुटिगत समिक्षा तथा सौरभको असहमति पुस्तकमा भेटिएका त्रुटिको समीक्षा हो । यी तीनवटा पुस्तकको लामो चिरफार हो— शल्यक्रिया । यसका लेखक जंगबहादुर शाह हुन् । यो कृतिको मूल्य ३ सय ५० रुपैंयाँ पर्छ ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्— दुर्गा सुवेदी । नेपालको पहिलो र एक मात्र विमान अपहरणमा उनी पनि संलग्न थिए । हालै प्रकाशित उनको संस्मरणहरूको सँगालो हो— विमान बिद्रोह : एउटा राजनीतिक अपहरणको बयान । यो पुस्तकमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध गरिएका विभिन्न संघर्ष पनि समेटिएका छन् । कांग्रेसले हतियार उठाउँदाका अन्तरकथा, कोइराला परिवारको भित्री कथा र त्यस क्रममा उनी स्वयंलाई पार्टीभित्रैबाट मार्न गरिएको षड्यन्त्रको भित्री कथा पनि यो पुस्तकमा समेटिएको छ । अझ रोचक त के भने सुवेदीकी श्रीमती सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश रहँदा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका आफन्त १० करोड रुपैंयाँ दिने प्रस्ताव लिएर आएको खुलासा पनि यो पुस्तकमा गरिएको छ । यो पुस्तक किताब पब्लिसर्सले प्रकाशन गरेको हो ।
नेपाली कथानक चलचित्र चलेछ बतास सुस्तरीकी निर्देशक सबु सुबेदीको उपन्यास हो— मञ्जूषा । उपन्यासकार सुवेदीले यो उपन्यासमा मञ्जूषाले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गरेकी छिन् । मञ्जूषा सामान्य परिवारमा हुर्किएकी पात्र हुन् । उनले लगातार पाँच जनालाई प्रेम गर्छिन् । आफ्नो पछिल्लो प्रेम टुटेपछि मञ्जूषा कसरी अगाडिको जिन्दगी बिताउने भन्ने निर्णयमा पुग्छिन् । प्रेममा केन्द्रित यो उपन्यासमाथि चलचित्र निर्माण गर्न सकिने सुवेदी बताउँछिन् । यो पुस्तक शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको हो ।
भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजाका बारेमा केन्द्रित पुस्तक हो— ‘रणहार’ । यसको मुख्य पात्र हुन्, रणजित मल्ल जसले भक्तपुरमा आधा शताब्दी शासन गरेका थिए । मल्लले सन् १७६९ मा पृथ्वीनारायण शाहका सैन्य र चलाखीपूर्ण कदमहरूका कारण राज्य गुमाउनुपर्‍यो । पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरमा कब्जा जमाएपछि उनको उपत्यका विजय यात्रा टुंगिएको थियो । इतिहासका अध्येता योगेश राज खुलेर सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि ऐतिहासिक विषयवस्तुमा लेखक योगेश राज रोचक ढंगमा प्रस्तुत भएका छन् । खासगरी यो पुस्तक भक्तपुर सत्तासिन कुलीन वर्ग र गोर्खालीसामु तिनले गरेको आत्मसमर्पणको कथा हो । नेपालयले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकको मूल्य ३ सय २५ रुपैयाँ छ ।
अर्थात अर्थतन्त्र : नेपाली इलम र उद्यमको यात्रा
अर्थ मामिलाका लेखक तथा टिप्पणीकार सुजीव शाक्यको पुस्तक ‘अर्थात् अर्थतन्त्र’ ले नेपाली अर्थतन्त्रलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गरेको छ । शाक्यले विभिन्न अंग्रेजी पत्रपत्रिकामा स्तम्भ तथा लेखहरू लेख्दै आएका छन् । उनी नेपाली भाषामा पहिलो पटक साक्षात्कार हुन लागेका हुन् । यो पुस्तक नेपालको अर्थतन्त्र कसरी सूरु भयो तथा नेपाली अर्थतन्त्र कता गैरहेको छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । शाक्यले मैना धितालसँगको सहकार्यमा यो पुस्तक तयार पारेका हुन् जसको मूल्य ४ सय ७५ रुपैयाँ छ ।
ग्लोबल सिटीजन फ्रम गुल्मी
ग्लोबल सिटीजन फ्रम गुल्मी कुलचन्द्र गौतमको अटोबायाग्राफी हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिव तथा राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को कार्यकारी उपनिर्देशकसम्म पुगेका गौतमले आफ्ना अनुभब, अनुभूतिहरू यो पुस्तकमा समेटेका छन् । यसमा लेखकको बाल्यकाल, जन्मिएको ठाउँमा भोगेको दु:ख, झेलेको संघर्षदेखि लिएर राष्ट्रसंघ तथा युनिसेफको उच्च ओहदा पुग्दाका आरोह–अवरोहहरू समेटिएका छन् । जीवनमा गौतमले नेलशन मण्डेला, बिल गेट्स, एड्वार्ड शेभर्नात्जेदेखि थाइल्यान्डका राजा भूमिबोल अदुल्यादेज लगायत युनिसेफका थुप्रै सद्भावना दूतसँग भेट्दाका रोचक अनुभवहरू समेटिएका छन् । यो पुस्तक अमेजोनको प्रिन्ट अन डिमाण्ड (पीओडी) तथा किण्डलमार्फत संसारभर उपलब्ध छ ।
मूल्य : ८ सय ९५ (सफ्ट कभर), मूल्य : १ हजार ३ सय ९५ (हार्ड कभर)
नेपाली समाजमा जंगबहादुरका अनेक कहानी सुन्न पाइन्छ— त्रिशूलीमा घोडासँगै हाम फालेको, अग्निगर्भबाट आमाछोरालाई निकालेको, मत्ताहात्तीलाई वशमा ल्याएको, धरहराबाट दुईवटा छातासहित हाम फाल्ने वाचा गरेको जस्ता थुप्रै कुरा । जंगबहादुरको बेलायत यात्राको डायरीमा आधारित भएर यो पुस्तक तयार पारिएको हो । ओरिएन्टल पब्लिकेसनको यो पुस्तक पदमजंग राणाले अंग्रेजीमा लेखेका अनि रामबहादुर पहाडीले नेपालीमा अनुबाद गरेका हुन् । यो पुस्तकमा जंगबहादुर निजी कुराहरू, उनका दु:ख, जीवनमा झेलेका संघर्ष, देशका लागि गरेको काम तथा उनको व्यक्तित्वका सम्बन्धमा थुप्रै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । २ सय ९२ पृष्ठको यो पुस्तकको मूल्य ४ सय २५ रुपैयाँ छ ।